အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည်နည်း
Posted by manawphyulay on Sep 3, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 11 comments
မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ အင်တာနက်သုံးနည်း
ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင်အလုပ်အကိုင်ရှာနေပါသလား၊ လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခု တည်ထောင်ချင်ပါသလား၊ ဆက်သွယ်ရေး နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ချင်ပါသလား၊ အလုပ်ရုံတွင် လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါသလား။ ထိုအရာအားလုံးကို ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲ၌ပင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပေးမည့်သူ (သို့) သင်ပြောသမျှကို လက်ခံနားထောင်ပေးမည့်သူများအား ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း၌ ပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီမည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်လျှင်လိုက်ခြင်း ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သင်၏အသိဥာဏ်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော The Jennings Company ၏အကြီးအကဲ Kathleen Jenning က ‘ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးသည် သင်သိသောအရာမဟုတ်၊ သင့်ကိုသာ သိသောအရာဖြစ်သည်’ ဟုဆိုသည်။ အလုပ်အကိုင်ကွန်ယက်များဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ မိန့်ခွန်းပြောကြား ချက်များအား နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များတွေ့ရှိနိုင်ခြင်း (သို့) သင်လိုချင်သော ကုမ္ပဏီမှ သင့်အား အလုပ်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိပါသည်။ ထိုကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပြည်တွင်းသတင်းစာ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်ဖတ်ရူခြင်း (သို့) စီးပွားရေးဂျာနယ်များတွင် ဖတ်ရူခြင်းဖြင့်လည်း ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ပတ်သက်သော web site များကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်များ ကိုသာ သင်ရရှိထားမည်ဆိုလျှင် ဧည့်သည်အဖြစ်သွားမည့် အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်စွမ်းရှိသွားပြီး မိတ်ဆွေအဖွဲ့သားများအတွက်လည်း အမြဲလိုလိုမေးခွန်းများပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်။
ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းဝေးပွဲကိုတက်ရောက်ရာတွင် Internet သည်အကောင်းဆုံး လက်နက်ပင်ဖြစ်သည်။
– သင်ရှာလိုသောနာမည်ကို Search engine တွင်အလွယ်ရှာဖွေနိုင်သည်။
– သင့် ထံတွင်ရှိသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား forward လုပ်၍ပေးနိုင်သည်။
– ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း email ပို့၍ပေးနိုင်သည်။
– အဖွဲ့၏ message board ပေါ်တွင်ရှိသော request များအား ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။
မဆင့်လျော်သော (သို့) မလိုလားအပ်သော email ပို့ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် Internet ကွန်ယက် သည် အကောင်းဆုံးလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် အခြားသူများပြောတာကို အရင်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးအနားယူမှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသုံးခြင်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးအမြင်များ၊ ဆက်သွယ်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်ဆက်သွယ် ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် Business Card များစုစည်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းတွေကိုသာ စုစည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အမှီလိုက်နိုင်ကြပါစေ။ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းသည်လည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း ကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြိုးစားမှုများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်လာပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လည်းတိုးတက်လာပါစေ၊ သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကြားတွင် ကွန်ယက် ဆက်သွယ်ခြင်းသည် မှတ်တိုင်သဖွယ်တည်ရှိနေလိမ့်မည်။
ဤဆက်သွယ်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကို သိပြီး ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထား လျှင် ရုတ်တရက် သင်၏မြင်ကွင်းပိုကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတများရရှိပြီး အဆက်အသွယ်ပေါများခြင်းတို့ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၌ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမည့် အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်တော့သည်။
မှန်ကန်သော နည်းလမ်းနဲ့ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုများ ရရှိနိုင်ကြပါစေနော်….
မျက်မှန်တတ်သူ အတွက် ပါဝါ ထပ်၍ ထပ်၍ တက်မည်၊
စိတ်ထားခြင်းမတိုက်ဆိုင် လျှင် စကားစစ်ထိုးပွဲများကြုံရ၍ သွေးတက်နိုင်သည်၊
အညောင်းမိ ဇက်ကျောတက်ရောဂါ ရမည်၊
မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ဆက်လက် ဖြည့်ပေးပါရန်..။
ဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ် မမနောရယ်၊ နာမည်က လူပေါ ဆိုတော့ ပေါတိပေါချာနိုင်တယ်ဆိုရမှာ၊
( ကိုပေါရေ စတာပါ .. သွေးတော့မတက်ပါနဲ့)
အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် ငွေကြေးကုန်ကျပါသည် ။ အညောင်းမိပါသည် ။ မိဘနှင့် ဇနီး/ချစ်သူ တို့မှ ညိုညင်ပါသည် ။ လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့သော ကောင်မလေးများကိုကျူရင်း အကျူလွန်၍ ငူရတတ်ပါသည် ။
ရည်းစားရှိသူတွေ မရှိသူတွေရဲ့ အားသာချက်တွေ
(၁) Online ဖိုးပိုက်ဆံ အကုန်အကျသက်သာခြင်း
(၂) အပို့အကြိုကိစ္စ ဖြစ်သော ဖယ်ရီ မရှိခြင်း
(၃) အချော့ရသက်သာခြင်း စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုမှ ကင်းဝေးစေခြင်း
(၄) မုန့်ဖိုးအား လောက်ငှစွာ သုံးစွဲလို့ရခြင်း
(၅) အချိန်မရွေးနေရာမရွေး လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိင်ခြင်း
(၆) အစားမှန် အအိပ်မှန် အထမှန်ခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းနေခြင်း
(၇) အိမ်မှ ဖုန်းဘေ ငွေနှုန်းများ သက်သာလာခြင်း
(၈) ပါးစပ်အားနံစေသော ဆေးလိပ် ၊ ကွမ်းယာ ၊ သေရည် ၊ ဒညင်းသီးများအား
(၉) ရည်းစာမရှိ၍ သူငယ်ချင်းအား ရင်မဖွင့်ရသဖြင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက
နားညီးသက်သာသောကြောင့် သင့်အား အလိုက်အသင့် ဆက်ဆံခြင်း
(၁၀) ရည်းစားမရှိပါက ဘီယာတိုက်တဲ့ ပိုက်ပိုက် သက်သာစေခြင်း
(၁၁) ရည်းစား၏ နားပူနားစာ ၊ အမိန့်များ ကင်းဝေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၁) လူအများကြား၌ ကြွားကြွားဝါ၀ါ နေနိုင်ခြင်း
(၂) ကိုယ်မရှိရင် သူပေး သူမရှိရင် ကိုယ်ပေး စွာနေနိုင်ခြင်း
(၃) ငှက်ပျောတုန်းဖက်သေစရာ မလိုခြင်း
(၄ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် လူရှိန်နေခြင်း
(၅) ကိုကို ၊ မောင် ၊ ချစ် ၊ မ ၊ မေ လို့ ယုယစွာ
(၆) Web site ပေါ်တွင်ကဗျာ များသစ်လွင်နေခြင်း နှင့် လန်းဆန်းတက်ကြွနေခြင်း
(၇) လက်သည်းခြေသည်း ရှည်ခြင်းမှကင်းဝေးစေခြင်း နှင့် တစ်ကိုယ်ရေ
(၈) ရည်းစားမရှိသူအား နှိမ်၍ မင်းမှာရောရည်းစားရှိလို့လားလို့ မေးလို့ရခြင်း
(၉) ဆောင်းတွင်းဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အနွေးထည် ၀ယ်ရသည့် ပိုက်ပိုက် သက်သာစေခြင်း
(၁၀) ပိုက်ဆံချေးလို့ရခြင်း နှင့်
(၁၁) နောက်ဆုံးရုံတင် ရုပ်ရှင်ကားများ အဆက်မပြက် ကြည့်ရခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
လုံးဝကို ကုန်ပါတယ် သောက်သောက်လဲ ကုန်ပါတယ် မဟားဒယားကုန်ပါတယ် ပိုးစိုးပက်စက် ကုန်ပါတယ် .. ဟီး … ကျန်သေးလားမသိ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ မရှိတော့ ရှာ ….
ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ အဖြစ်ပါ …
ဒီအဆိုကို ကန့်ကွက်ပြီး … (၉) ဆောင်းတွင်းဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အနွေးထည် ၀ယ်ရသည့် ပိုက်ပိုက် သက်သာစေခြင်း … မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့် … ငြင်းဆိုရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီနှစ်စ (၃)လပိုင်းလောက်မှာ မိုးတွေရွာ အရမ်းအေးတဲ့ ကာလကို မှတ်မိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် … အဲဒီတုန်းကဗျာ ဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားမှာ ဘယ်လောက် အနွေးထည်ထူထူဝတ်လာပြီး ဘယ်လောက်ပဲ နှစ်ယောက် ကနေ တစ်ယောက်ဖြစ်သွားအောင်နေနေ ဘယ်လိုမှ အချမ်းဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် လုံခြုံရာ (လုံခြုံရာဆိုတာ အအေးဓာတ်လုံခြုံတာကို ပြောတာနော် .. တစ်မျိုးမထင်ကြပါနဲ့ ) ဆိုင်ခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ခဲ့ရပါကြောင်း …
ဒီအဆိုကို အကြွင်းမဲ့ထောက်ခံခြင်း … (၁၁) နောက်ဆုံးရုံတင် ရုပ်ရှင်ကားများ အဆက်မပြက် ကြည့်ရခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ရှင်းမပြတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံး မှတ်မိတဲ့အပိုင်း ကြည့်မိတဲ့အပိုင်းက အတော်နည်းသဗျ …
“”ကွန်ယက်ဆက်သွယ် ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် Business Card များစုစည်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းတွေကိုသာ စုစည်းနေခြင်းဖြစ်သည်””
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. အားနေရင်ကိုသုံးချင်လာတယ်။ဟိ. ဟိ အပျင်းလဲပြေ သုတလဲတိုးပေါ့။
အသုံးချတဲ့သူပေါ်မှာ မူတည်ပြီးအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မူရှိပါတယ်၊သာမန်လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကိုအွန်လိုင်းအသုံးပြုချိန်(၂)နာရီရှိတယ်ထား။ငွေကုန်သွားတာကိုမဆိုပါဘူး၊မိမိရဲ့ဘ၀မှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကအချိန်ပါပဲ…တစ်ရက်ကို(၂)နာရီ…တစ်လမှာနာရီပေါင်း(၆၀)၊တစ်နှစ်မှာနာရီပေါင်း(၇၂၀)…တစ်နေ့(၂၄)နာ၇ီနဲ့စားရင်..ရက်ပေါင်း(၃၀)…ရပါတယ်..ဒါဆိုရင် သက်ရှင်လျှက်တစ်နှစ်မှာတစ်လဆုံးရှုံးနေသလိုဖြစ်နေပြီပေါ့၊
အဲဒီတော့ လူဘ၀ဆိုတာရခဲတယ် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချသွားသင့်တယ်ဆိုတာ မိမိတို့ကိုတိုင်ပဲသိမှာပါ။
သေသေချာချာစဉ်းစားမိရင် ဒီဘ၀မှာလူလာဖြစ်၇တာအရမ်းကံကောင်းတယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်…ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျနော်တို့ သူတစ်ပါးခူးပြီးခတ်ပြီးသားလေးကိုအစဉ်သင့်စားသုံးနိုင်လို့ပါပဲ။ပညာရှင်များရှာဖွေစုဆောင်းထားသောရေးသားပြုစုခဲ့သည်များကို အလွယ်တကူဖတ်ရူလေ့လာမှတ်သားနိုင်လို့ပါပဲ။တစ်ချိန်ကမိမိဖတ်ချင်လှသောစာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် မိုင်လေးဆယ်ကျော်လမ်းလျှေက်သွားပြီးရှာဖွေဖတ်ရူခဲ့သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားခဲ့သောခေါင်းဆောင်ကြီး အီဗရာဟင် လင်ကွန်းပါပဲ။ကျုပ်တို့တစ်တွေ ထိုသို့သောလူမျိုးများကိုများစွာအားကျအတုယူသင့်ပါတယ်…
လူ့လောကမှာ လူဖြစ်လာပြီး အလကားအချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့….အလကားလူ….Useless People’s…ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့….
ဟုတ်တာပေါ့ ကိုဇော်မင်းရယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ် အကျိုးရှိဖို့ရယ်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးတက်မှုရှိနေဖို့ လူသားတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်သုံးတာကလည်း သုံးတတ်ရင် ဆေး တကယ့်ကမ္ဘာရွာကြီးပါပဲ လိုချင်တာ အကုန်ရှာလို့ရတယ်လေ။ အဲ မသုံးတတ်ရင်တော့ ဘေးဆိုသလိုပေါ့။ ကျွန်မသမီးကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပါပြီတို့ ကျွန်မသားကတော့ ဘယ်ဟာဖြစ်ပါပြီတို့ ဖြစ်ကုန်ကြတော့ပါပဲ။ ဒါဟာလည်း လူတိုင်း မှန်ကန်သောနည်းလမ်းနဲ့ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
သုံးတဲ.သူအပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတာပါ
အင်တာနက်ကနေ ဘွဲ.လက်မှ တစ်ခုရအောင် လုပ်လို.ရပါတယ်